Qunsuliyada Mareykanka iyo Saldhig Boolis ku yaal Istanbul Oo Weerar lagu Qaaday – STAR FM SOMALIA
Qunsuliyada Mareykanka iyo Saldhig Boolis ku yaal Istanbul Oo Weerar lagu Qaaday
Labo nin oo hubeysan ayaa Rasaas ku furay meel ka baxsan Qunsuliyada Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, saacado kadib markii qarax gaari lagu weeraray saldhig Boolis.
Ugu yaraan todobo ruux ayaa ku dhaawacmay weerarka bambaano ee lagu qaaday saldhiga booliska, kuwaasoo shan ka mid ah ay ahaayeen Boolis.
Sidoo kale ma jirin waxyeelo ka dhalatay weerarka kale ee lagu qaaday Qunsuliyada Mareykanka, markii labo nin hubeysan ay rasaas ku fureen dibada Qunsuliyada.
Kooxihii weeraray Qunsuliyada Mareykanka ayaa cararay, markii ciidamada booliska ay rasaas ugu jawaabeen.
Weerarkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo ay sii xoogeysatay xiisada u dhaxeysa Turkiga iyo Jabhadda PKK, kadib markii ay weeraro cirka ah ku qaadeen.
Turkiga ayaa door muuqda ka qaadanaya dagaalka ka dhanka ah Daacish, kadib markii todobaad ka hor uu weeraro cirka ah ku qaaday saldhigyo gudaha Suuriya ku leeyihiin.
Laba weerar oo maanta ka dhacay Magaalada Istanbul Ee Wadanka Turkiga (Daawo Sawirada)
Ciidamada Daacada u ah Madaxweyne Haadi Oo la Wareegay Magaalada Muhiimka ah ee Zinjibar
Soo dhawaada saaxiibayaal, halkan waxa aan idinkugu soo gudbineynaa Bandhigga Horseed.
Barnaamijkan oo ku saabsan dhismaha wadooyinka iyo sida ay door ugu leeyihiin horumarka dhaqaale, amni iyo bulsho ee dalka, ayaa waxaa ku jira sheekooyin xiiso badan.
Cabdulqaadir Maxamed Xuseen ayaa soo jeedinaya.
Halkan ka dhageyso: